I-Old English Cottage in Chipping Warden - I-Airbnb
I-Old English Cottage in Chipping Warden
Chipping Warden, England, i-United Kingdom
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Mike & Izzy
U-Mike & Izzy Ungumbungazi ovelele
Ithuba eliyivelakancane lokuhlala esitolo sokusanhlamvu esiguqulelwe ngekhulu le-15 enhliziyweni ye-
Izwe laseBrithani emngceleni weNorthamptonshire, Oxfordshire & Warwickhire.
Leli kotishi elihle elakhiwe ngamatshe elinezitezi ezimbili lisethelwe eNorth Cotswolds endaweni nje encane
idolobhana elibizwa ngeChipping Warden.
Leli yizwe elikahle labahambi futhi siyazamukela izinja (hhayi ezitezi ezingaphezulu sicela), nalapho
kunama-pubs amaningi ngaphakathi kwebanga lokuhamba elilula kufaka phakathi indawo yokucima ukoma yasendaweni ngaphakathi kwemizuzu emi-5 yokuhamba.
Itholakala kalula ngamamayela ayi-6 yakha idolobha laseBanbury elinomlando elinezindawo zokuthenga, Ihhovisi Lezivakashi, isiko, icinema kanye nesiteshi sesitimela esikhulu. Isikhumulo sezindiza saseBirmingham siphinde sibe uhambo olufushane nje lwesitimela, sinenkonzo yamabhasi eya edolobhaneni laseChipping Warden.
Lena i-rustic, engenawo ama-frills kodwa i-cottage ethokomele. Uma ufisa ukuzizwa sengathi uphakathi nendawo yasemaphandleni, kodwa ngaphakathi kokufinyelela kwedolobha elikhulu, lizofanelana nawe. Njengoba iqhele ngamakhilomitha angu-5 ukusuka ku-M40 futhi cishe enkabeni yezwe ikotishi litholakala yonke indawo.
I-Cottage ngokwayo ihlotshiswe ngozwela ukuze ihlinzekele izivakashi ezihlukahlukene. Inekhishi elisebenza ngokugcwele elinomshini wokuwasha ohlelweni oluvulekile olungaphansi, futhi phezulu kunegumbi lokugeza kanye namakamelo okulala amabili - igumbi elilodwa lokulala elinombhede ophindwe kabili, kanti elinye elinama-singles amabili.
I-Cottage itholakala emagcekeni endlu enkulu enengadi yayo yangasese yokufunda noma ukuphumula elangeni, futhi ihlaza umlingiswa, kufanele ubheke izithombe ukuze uthole umbono walesi simo esihle.
Isikhala sinikeza amandla okulala amane ngokunethezeka. Kunendawo yokujabulisa abayisithupha ngokukhululeka ngosofa abathathu kanye netafula lokudlela & nemishini yabayisithupha, elungele labo abavakashela abangani endaweni.
Kukhona ukuhamba okuningi kuzo zonke izinhlangothi ngaphandle kwesidingo sokungena emotweni, imininingwane lapho umsingathi ajabule kakhulu ukwabelana nawe.
Indlu enkulu ihlalwa ngezikhathi ezithile, isikhathi esiningi uzokwazi ukuncoma izingadi ezanele ezigcinwa zisezingeni eliphezulu. Indawo yezithelo ne-patio ingase ingafinyeleleki uma abanikazi behlala, kodwa kusekhona indawo yengadi yangasese enhle ngemuva kwekotishi. I-cottage ine-driveway yayo, ekhombisa ngempumelelo ukuhlukaniswa phakathi kwezindlu ezimbili.
Uma ufisa ukuphuma ngemoto kungakapheli ihora ubheke ezindaweni ezahlukene kuningi ongakuhlola, kusukela kuma-spa kuya ezindaweni zomlando, kusukela e-Oxford City nase-Shakespeare's Stratford kuya e-Bicester Village Shopping experience, izakhiwo eziningi ze-National Trust kanye nezindlu zasemaphandleni kanye ne-Warwick Castle. kanye neBroughton Castle. Sicela uzizwe ukhululekile ukucela noma yiluphi ulwazi mayelana nokuthi yini etholakalayo endaweni, njengoba singathanda ukuthi ukuhlala kwakho kube okuphelele ngangokunokwenzeka.
4.86 · 81 okushiwo abanye
Kukhona ukuhamba okuningi kwebanga ngalinye le-walker okutholakalayo ukusuka ekuhambeni kwemizuzu eyishumi phansi ngomzila wezwe kuye kugcwele ekuqwaleni ukwehla ngendlela ye-Jurassic.
Le ndawo icwile emlandweni ngokuxhumana kwayo nempi yombango futhi kunezindawo eziningi ezithandekayo zasendaweni ezivela esontweni lendawo kanye nezindawo ezibukekayo.
Kukhona futhi indawo yokucima ukoma yezwe engaphakathi kohambo lwemizuzu emi-5-10 kanye nokufinyelela kwezinye izindawo eziningi zokushicilela ezisukela kuma-gastro pubs kuye kuma-country pubs ngaphakathi kwebanga lokuhamba. Enye yezintandokazi zethu iRed Lion eCulworth, kodwa uzodinga ukubhukha lokhu njengoba iba matasa ngokushesha.
Njengoba kunedolobha elidala lezimakethe laseBanbury eliseduze kakhulu, ungafinyelela uhla lwezinye izindawo zokudlela, izitolo, icinema nezitolo ezinkulu.
Ibungazwe ngu-Mike & Izzy
We are a married couple, in our late 30's currently living in Surrey with family connections in the Chipping Warden area. In fact, the property belongs to our family, with the larger house occasionally occupied for holidays and family events.
We love visiting this area of England because it's so beautiful, and the tranquil and stunning location of the cottage we are advertising is just perfect for those wanting to escape city life for a short or longer time, and enjoy the outdoors and the amazing walks it has to offer. Not to mention the local pub grub.
We are rarely present in the cottage itself but will make sure you always have everything you need for your stay and will always be on hand on the phone to answer any questions you might have, pre and during your stay.
If you have any questions about us or the cottage then please do not hesitate to drop us a message and we'll do our best to get back to you as soon as possible.
Ungaqiniseka ukuthi ukuhlala kwakho kuzoba yimfihlo ngendlela ofisa ngayo. Kunengadi ehlanganyelwayo kodwa kuyacaca ukuthi ngeyasendlini encane ukuthi yini eyendlu enkulu. Indlu eyinhloko ayihlali njalo kodwa uma ikhona, umnikazi unobungane futhi ujabule kakhulu ukuphendula imibuzo mayelana nendawo yendawo. Kungenjalo inombolo yocingo enikeziwe izotholakala ngesizathu sokuphendula noma yimiphi imibuzo onayo, njengoba sishilo esigabeni esandulele, kubalulekile kithi ukuthi ujabulele ulwazi lwakho, njengoba singathanda ukuthi leli libe yindlu encane izivakashi zethu ujabulele ukubuyela, unyaka nonyaka.
Ungaqiniseka ukuthi ukuhlala kwakho kuzoba yimfihlo ngendlela ofisa ngayo. Kunengadi ehlanganyelwayo kodwa kuyacaca ukuthi ngeyasendlini encane ukuthi yini eyendlu enkulu. Indlu ey…
UMike & Izzy Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Chipping Warden namaphethelo